LEGO Boost के हो: यसलाई गहिराइमा जानको लागि मार्गनिर्देशन - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> खिलौने >> LEGO Boost के हो?
यसमा के समावेश छ?
यो main मुख्य ईंट वा टुक्रा मा आधारित छ:
हबमा ब्लुटुथ र २ मोटर्स भएको हब।
दोस्रो बाह्य मोटर
र त्यसपछि र color र दूरी सेन्सर।
निर्देशनहरूमा आएको सम्मेलनहरू यी तीन टुक्राका वरिपरि बनाइन्छन्। तर यी मुख्य हुन् किनभने तिनीहरू ड्राइभि forces्ग फोर्स हुन्। कुनै पनि अन्य प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, तर यी सक्रिय भागहरू आवश्यक छन्।
यदि तपाईं यसलाई किन्नुहुन्छ, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनु पर्छ हब सार्नुहोस्
व्याख्या गरिएका as वटा सम्मेलनहरू यस प्रकार छन्। प्रत्येक एक फरक स्क्रीन संग आउँदछ, जहाँ तपाईं नयाँ सामान माउन्ट र नयाँ प्रोग्रामिंग ब्लक अनलक गर्नुहोस्। जब सम्म तपाईं माउन्ट र प्रमाणीकरण गर्नुहोस् कि आधार काम गर्दछ, तिनीहरूले तपाईंलाई अगाडि बढ्न दिदैन।
यो फिगर बराबरीको उत्कृष्टता हो, जुन एक दिमागमा आउँदछ जब सबैले LEGO® Boost को सोच्दछन्, किनभने यो छ "humanoid" आकारको साथ रोबोट। यो मोन्टेज हो जुन हामीलाई सबैको रोबोटको दिमागमा रहेको विचारको सम्झना दिलाउँछ।
यो जबरदस्त रमाईलो छ। वर्नीसँग हामी यसको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं, यो अगाडि र पछाडि सर्छ र यसको ठाडो अक्षमा, आफैमा फर्कन्छ। यस तरिकाले हामी यसलाई घुमाउने बनाउँछौं।
ऊ आफ्नो हतियारहरू चलाउँदैन। हामी उसलाई मैन्युअल रूपले वस्तुहरू लिनको लागि बनाउन सक्छौं। र एक्सेसरीहरूको एक सुन्दर सुविधा यो हो कि यसले हामीलाई एक प्रोजेक्टिल जस्तो, LEGO टोकन शूट गर्न अनुमति दिन्छ।
किट प्लेमाट, क्यालिब्रेट गरिएको नक्साको साथ आउँदछ त्यसैले हामी रोबोट माथि सार्न सक्छौं।
एक धेरै हास्यास्पद मोन्टेज जुन केटीहरूले माया गर्थे। यो सर्दैन, यसले आफ्नो टाउको र पुच्छर सार्दछ र केहि आन्दोलनहरू, र colorsहरू, ध्वनिहरू, इत्यादिसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
यस समयमा, २ सम्मेलनहरू बाँकी रहेको, यो एक हो जुन मलाई कम प्रभावित गर्दछ। यसले मलाई निराश तुल्याएको छ र मलाई लाग्छ कि मुख्य समस्या भनेको ब्लकहरूको बारेमा कुनै जानकारी छैन र किनकि तपाईलाई थाहा छैन हरेकको लागि के हो, तपाईलाई एक पटक भेला हुने र कसरी कुराकानी गर्ने भन्ने थाहा छैन।
भिजुअली यो धेरै राम्रो छ र साथै फ्रेटले रंग र कोड र दूरी सेन्सरको साथ के गर्दछ र हब मोटर्स र बाह्य मोटरको साथ प्रभावहरू सक्रिय गर्न बिभिन्न लिभरहरूको प्रयोग गरेर के गर्दछ।
एक्रोनिम के हो? मल्टि-टुल्ड रोभर, रोभर जस्तै (वाहन) बहु उपकरणहरू।
यो अझै माउन्ट गरिएको छैन, तर मैले जे देखेको छु त्यसबाट म यो मनपर्दछु, यो सर्दछ र गोली हानिन्छ। त्यो संग उसले धेरै अंक प्राप्त गरिसक्यो।
यो लघु LEGO® मोडेलहरू निर्माण गर्न मिनी उत्पादन लाइन हो
यो भेला हुने बित्तिकै, म यहाँ मेरो छाप छोड्ने छु।
फाइदाहरू र बेफाइदाहरू। सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा नराम्रो
सबै उत्पादनहरू जस्तै, यसमा सकारात्मक र नकारात्मक चीजहरू छन्। म यो सिफारिस गर्दछु। सत्य यो हो कि हाम्रा छोरीहरूले यसलाई माया गर्थे र मैले पनि यसलाई माया गर्थे र केहि समस्याहरू र केही कुराहरूमा म टिप्पणी गर्न लागेको छु बाहेक, यो धेरै रमाईलो र प्रयोग गर्न सजिलो छ।
मलाई के कम्तिमा LEGO Boost को मन पर्छ
कि ब्लकमा स्पिकर छैन र आवाजहरू यो खेल्दछन् र ट्याब्लेट वा मोबाइल अनुप्रयोगको माध्यमबाट यसले के रेकर्ड गर्दछ। तपाईंले गर्नुहुने असेंब्लीको बारेमा कुरा गरिसकेपछि, तपाईंले ट्याब्लेट राख्नु भएको काम समाप्त भयो भने यसले ठूलो अनुग्रह गुमाउँछ।
उपकरण अनुकूलता। रोबोटिक्स किट किन्नु र तपाईको ट्याब्लेट उपयुक्त छैन भनेर पत्ता लगाउनु मैले इन्टरनेटमा देखेको सबैभन्दा ठूलो गुनासो हो। मलाई समस्या भएको छैन, यद्यपि ब्लुटुथको साथ समानताले मलाई Huawei ट्याब्लेटको साथ समस्या दिन्छ र हामीले यसमा जबरजस्ती गर्नु पर्छ जस्तो मैले वर्णन गरें। यो ट्यूटोरियल.
मूल्य। ठिक छ, यो उच्च मूल्य हो, यो सत्य हो, जुन मलाई यो मूल्यवान छ जस्तो लाग्छ, तर तपाइँ पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँका बच्चाहरूलाई यो मनपर्दछ।
कागजात निस्सन्देह, अहिले सम्मको सम्पूर्ण अनुभवको सब भन्दा खराब हो। यद्यपि एप्लिकेसनले तपाईलाई गर्नु पर्ने सबै कुरामा मार्गदर्शन गर्दछ, जहाँ कतै पनि छैन जहाँ उनीहरुले प्रत्येक प्रोग्रामिंग ब्लक को लागी के हो वर्णन गर्छन् र यदि तपाईले प्रयोग गर्नुभएन वा यदि भेला भएको बाहेक अरू कसैले लिन्छ भने तपाईलाई के गर्ने थाहा छैन। धेरै ब्लकहरूको साथ।
मलाई लाग्दछ कि दस्तावेज मुद्दा केहि हो जुन उनीहरूले LEGO बाट हेर्नुपर्छ र समाधान गर्नुपर्दछ।
मलाई के मन पर्छ
मलाई के मनपर्दछ कि यसले बच्चाहरूलाई उन्नति गर्न र स्वतन्त्र रूपमा सिक्न अनुमति दिन्छ र तिनीहरूलाई यो धेरै मनपर्दछ।
थप रूपमा, सन्तोषजनक परिणामहरू चाँडै प्राप्त हुन्छन्। के साथ हामी तिनीहरूलाई demotivate छैन
जस्तो कि यो LEGO हो, हामी कुनै पनि भिन्नताहरू बनाउन सक्छौं जुन हामी टुक्राहरूसँग सोच्न सक्छौं। र हामी तीन विशेष ब्लकहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं ल्यागोससँग जुन हामीसँग घरमा छ कुनै पनि अन्य सम्मेलनमा। तिनीहरूले हाम्रो ईंटहरू वास्तवमै अन्तर्क्रियात्मक बनाउँदछन्।
यो LEGO क्लासिक र Tecnich संग संगत छ
नयाँ विषयवस्तुहरू र वेबको नयाँ दिशा
दूध वा गलालिथबाट प्लास्टिक कसरी बनाउने
विभाग इलेक्ट्रोनिक्स, खिलौने टिकट नेभिगेसन
1 यसमा के समावेश छ?
2 M माउन्टहरू
2.2 बिरालो फ्रान्की
2.3 गितार 4000०००
2.5 अटो निर्माणकर्ता
3 फाइदाहरू र बेफाइदाहरू। सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा नराम्रो
3.1 मलाई के कम्तिमा LEGO Boost को मन पर्छ
3.2 मलाई के मन पर्छ